तराइ मधेश र स्थानीय चुनाव
सरकारका अगाडि रहेका धेरै चटाराहरुलाई चटक्क छोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रवार राति चीनको वोआओतिर लागे । वोआओ प्रस्थान गर्नुअघि दाहालले आफनो अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको काम चलाउने अख्तियारी कसैलाई दिएनन ।
वितेका केही समय यताका घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीलाई थकाएको थियो । एकातिर, चुनावका लागि सहमति जुटाउनु र अर्कोतिर सरकार टिकाउन नैतिक–अनैतिक सवैप्रकारका गठवन्धनमा प्रवेशगर्नु सुखद कुरा पक्कै थिएनन प्रधानमन्त्रीका लागि । यी सवै घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक उर्जा पक्कै पनि घटायो ।
उसैपनि राजनीतिक रुपमा दाहाल नेतृत्वको गठवन्धन सरकार तदर्थवादी कार्यसूचीमा नै चलेको देखिएकोछ । वैशाख ३१ गते मतदान हुनेगरी सरकारले स्थानीय चुनावको घोषणा गरी सकेपनि प्रमुख चुनाव आयुक्त स्थानीय चुनावका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण वन्न नसकेको गुनासोगर्दैछन । त्यस्तो राजनीतिक वातावरण वनाइदिन उनी राजनीतिक दलहरु गुहार्दैछन ।
यो उनको काम होइन । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि राजनीतिक वातावरण निर्माणको पहल उसैले लिनु पर्ने हो ।
कदाचित घोषित मितिमा चुनाव हुन सकेन भने त्यो सरकारको असफलता हुन्छ । यो कुरामाथि सरकारले कति विचार पुर्याएको छ त्यो यसैभन्न सकिदैन ।
किनभने, यतिवेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी – देशका तीनवटै प्रमुख राजनीतिक दल चुनावको पक्षमा भै सकेपछि पनि चुनावको वातावरण वन्न सकेको छैन । वर्तमान राजनीतिको सवभन्दा अप्ठेरो पाटो नै यही हो । पक्कै पनि अहिलेको अवस्थामा चुनावगर्नु प्रमुख प्रतिपक्षले मांगगर्ने र कांग्रेस–माओवादीले मांग पूरागर्ने खालको सजिलो छैन ।
मधेश केन्द्रित पार्टीहरु, मधेशका जनता र खासगरेर प्रदेश नम्वर दुइका मतदाताले आगामी चुनावलाई स्वीकार गर्नेछन कि गर्ने छैनन ? यो अहिले सवैको चासोको विषय हो । राजनीतिक दलहरुले भोलि आउन सक्नेअसामान्य परिस्थितिको पूर्वानुमानगर्न सकेका छैनन ।
प्रदेश नम्वर २ मा स्थानीय चुनावका लागि वातावरणको निर्माण हुन सकेन भने स्थानीय चुनावको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रदेश नम्वर दुइ र मधेश तराईका अन्य भागमा चुनावहुन सकेन भने वाँकी देशका लागि त्यसको सन्देश के जाला ? कसैले भन्न सक्दैन ।
ठूला वा साना, राजनीतिक दलका नेताहरुको विवेकशील निर्णयमा नै चुनाव हुने नहुने कुरा निर्भर गर्दछ ।
मधेशका नेताहरुले वर्तमान सरकारसंग तीन वूँदे सहमति गरेर सरकारलाई समर्थन गरेका हुन ।
तर, सरकारले प्रादेशिक सीमांकन सहितका मांगहरुलाई पूरागर्न नसकेपछि मधेशी मोर्चाले त्यो समर्थन निरस्त गरी सकेको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन
फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा सरकार
टिकाउन वाध्य भएका छन ।
सरकार टिकाउनकै लागि अनेक प्रकारका राजनीतिक गठवन्धनमा प्रवेशगर्नु उनको वाध्यता वनेको छ । मधेशी मोर्चा र सरकारका वीचको दूरी वढदै जानु र संघीयता विरोधीहरुसंग सरकारको लसपस वढदै जानु मोर्चा र सरकार दुवैका लागि राम्रो सन्देश होइन ।
मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारसंगको सम्वन्धमा व्यतिक्रम आउनु राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि उत्साहजनक कुरा होइन ।
मधेशका मांगहरुमा सरकारले सारै अप्ठेरो ठहर्याएको मांग पाँच नम्वर प्रदेशको प्रादेशिक सीमांकनमा फेरवदल हो ।
यो विषयले त्यति ठूलो विवाद जन्माउनु पर्ने थिएन । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तथा कांग्रेस र माओवादीका प्रभावशाली सांसदहरुले यसैमा खोचे थापे । एमालेले यसलाई राष्ट्रिय समस्याको
जटिलताका रुपमा नहेरेर आफनो भोट वैंकको रुपमा हेर्यो ।
भोटको राजनीतिले देशको राजनीतिलाई विथोल्न हुने थिएन । तर विथोलियो । यसवाहेक पनि, एमालेले मधेश लक्षित गरेर राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नारा चर्कायो । राष्ट्रवादी व्याख्याकै क्रममा, पाँच नम्वर प्रदेशमा गरिने सीमांकनको हेरफेर नेपाली राष्ट्रिय अखण्डताकै लागि खतरावन्ने तर्क अगाडि सारियो ।
क्षेत्र केन्द्रित आन्दोलन भयो । आन्दोलन राष्ट्रिय अखण्डताकोे पक्षमा भन्दापनि प्रकारान्तरले संघीयताको विरोधमा केन्द्रित रहेको कुरा वुझन धेरै समय लागेन ।
यो आन्दोलन मार्फत कांग्रेस, एमाले र माओवादीका असन्तुष्ट समर्थकहरु देशमा कायम हुन लागेको संघीय व्यवस्थाका विरुध्द एकजूट भएको देखियो । ती समर्थकहरुले आफनै पार्टी नेतृत्वका विरुध्द सांकेतिक प्रदर्शन गरेका थिए ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मधेश आन्दोलनबाट उठान भएको विषय हो संघीयता । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अन्तर्गत मधेशका जनताले अधिकार हासिल गरेरपनि त्यसको उपभोगगर्न नपाएपछि संघीयताको कुरा उठनु परेको हो ।
संघीयतामा शासनमाथि जनताको प्रत्यक्ष पकड हुन्छ र जनताले अधिकार र विकासमा समान हिसावले अंशियारी पाउँछन भन्ने मान्यताले यसको उदवोधन भएको हो । नेपालको संविधानले संघीयतालाई देशको आधारभूत शासन व्यवस्थाका रुपमा स्थापित गरेपनि संघीयताका विरुध्द भ्रमको खेती रोकिएको छैन । यो अवस्थामा मधेशका दलहरु पनि अप्ठेरोमा छन ।
एकातिर, उनीहरुमा सरकारप्रतिको चिडचिडाहट वढेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय चुनावमा सहभागी नहुने विचार अप्रासांगिक भएको छ । मधेशका दलहरुले स्थानीय चुनावमा भाग नलिंदा अहिलेसम्म प्राप्त भएका अधिकारहरु संस्थागत हुन सक्ने छैनन । राजनीतिक प्रवाहमा मधेशी दलको असहभागिताले संघीयताको प्रयोग प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
बाटो ठूला राजनीतिक दल र मधेशी दल दुवैथरिका लागि निष्कण्टक छैन । २०६३ साल यता कमलामा धेरै पानी वही सकेको छ । मधेश आन्दोलनका उपलव्धिहरु संस्थागत नभएको अहिलेको अवस्थामा मधेशका नेताहरुको कदम सन्तुलित ढंगले अघि वढनु पर्दछ ।
नेपाल सवैको देश हो । यो देशप्रति मधेशको मोह कसैले चुनौति दिन सक्ने विषय होइन । देशका जनता विपदमा पर्दा मात्र होइन, देशको सीमामा अतिक्रमणहुँदासम्म मधेशले देशको रक्षा गरेको छ । नेपाल र भारतका वीच सीमा सम्वन्धी वार्ताहुँदा दशगजामा उभिएर देशको सीमाको रक्षागर्ने मधेशी हुन ।
नेपाल सरकारले सँधै ती मधेशी नागरिकको सम्मान गरेको छ । त्यो सम्मानको सनद अहिले पनि सुरक्षित राखेका छन जनताले । तर, आजका शासनकर्ताहरुले त्यो संवेदनशीलता वुझेका छैनन ।
राजनीतिमा राजनीतिक दलहरुले आफनो पक्षमा जीरहगर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन ।
सत्ता प्राप्तिको यात्रामा लागेका दलका नेताहरु भय र भ्रम फैलाएर पनि स्वार्थ सिध्द गर्दछन । अहिले देशमा मधेशी र पहाडी दुइ शव्द खूव प्रचलित छ ।
मधेश र पहाड एक आपसमा टुक्रिन्छन भन्नु भ्रम र भयको खेतीगर्नु हो । यतिवेला पहाड र मधेशका वीच विवाद होइन,
राजनीतिक दलहरुले सिर्जना गरेको गतिरोध मात्र छ । मधेशलाई भाषा, भेष–भूषा, संस्कार र संस्कृति सवै तत्व सम्मिलित भएको अधिकार चाहिएको छ । यो अधिकारको होइन । अधिकार त संविधानले प्रत्याभूत गरेकै छ । यो त अधिकारमाथिको शेयरको प्रश्न हो । समान पहूँच र आत्म–सम्मानमा समान अंशियारी ।
मधेशको प्रश्नमा वर्तमान सरकारले सन्तुलन र समझदारीपूर्ण व्यवहारगर्न सक्यो भने स्थानीय चुनाव सम्पन्नगर्न त्यति कठिन हुनेछैन । तर, पुरानै राजनीतिक मान्यतालाई नयाँ शव्दमा ढाल्ने सोच वनायो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।